Dalka Brazil ayaa kor u dhaafay 1 milyan oo xaaladood markii coronavirus ku faafay gudaha dalka – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka Dalka Brazil ayaa kor u dhaafay 1 milyan oo xaaladood markii coronavirus...
SAO PAULO – Dawladda Brazil ayaa Jimcihii xaqiijisay in dalku kor u kacay in ka badan 1 milyan oo ah kiisas la xaqiijiyey inuu ku dhacay cudurka coronavirus, oo ah kan labaad ee Mareykanka oo keliya.
Wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa sheegtay in wadarta guud ay hadda gaartay 1,032,913, taas oo ka badan 50,000 laga soo bilaabo Khamiista. Wasaaraddu waxay sheegtay in kororka muuqda uu sabab u ahaa sixitaanka maalmihii hore lambarrada aan la soo sheegin.
Madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro ayaa wali hoos u dhigaya halista viruska ka dib ku dhawaad ​​50,000 oo dhimasho ah oo ka dhacey COVID-19 seddex bilood gudahood, isagoo sheegay in saameynta talaabooyinka go’doominta bulshada ee dhaqaalaha ay ka sii dari karaan cudurka laftiisa.
Khabiirrada ayaa rumeysan in tirada dhabta ah ee kiisaska ka jira Brazil ay ka badan karto ilaa toddoba jeer ka sarreyn karto tirakoobka rasmiga ah. Jaamacadda Johns Hopkins ayaa sheegtay in Brazil ay sameyneyso celcelis ahaan 14 tijaabo 100,000 100,000 oo qof maalin kasta, waxayna khubarada caafimaadku sheegeen in tiradaasi ay ka badan tahay 20 jeer wax ka yar intii loo baahnaa si ay ula socdaan viruska.
Xogta rasmiga ah waxay muujineysaa hoos u dhac ku yimid fayraska woqooyiga Brazil, oo ay kujirto gobolka adag ee Amazon, dhul gariirka xaaladaha iyo dhimashada magaalooyinka ugu waaweyn ee xeebta Atlantik, laakiin koror xagga koonfureed ah.
Gudaha baadiyaha reer Braziil, oo aad ugu diyaarsan wax ka qabashada qalalaase, masiibada ayaa si cad u koraya. Magaalooyin badan oo yaryar ayaa leh nidaamyo daryeel caafimaad oo daciif ah iyo fayadhowr aasaasi ah oo aan ku filnayn in laga hortago fiditaanka.
“Waxaa jira tiro badan oo ah sinnaan la’aanta gobolka ee nidaamkeenna caafimaadka bulshada iyo xirfadlayaal yar yar oo gudaha ah,” ayuu yidhi Miguel Lago, madaxa fulinta ee Daraasaadka Caafimaadka ee Barashada Caafimaadka ee Brazil, kaas oo la taliya saraakiisha caafimaadka dadweynaha. Taasi waxay abuurtaa cidla daryeel caafimaad oo fara badan, iyada oo dadku ay masaafo dheer u aadaan si ay dareen u helaan. Markii ay ka baxaan isbitaalka, fayrasku wuu raaci karaa. ”
Gobolka soosaarka lo’da ee Mato Grosso waxaa si dhif ah u taabtay fayraska markii ay ku dhufatay magaalooyinka ugu waaweyn dalka bishii Maarso. Fadhiga meel aad uga fog xeebta, inta u dhaxaysa soohdinta Bolivia iyo caasimada Brasilia ee Brasilia, 3.3 milyan oo ka mid ah deggeneyaashu waxay ku noolaayeen nolol caadi ah ilaa May. Laakiin hadda dadkeedu waxay ku nool yihiin meel xiritaan isla markaana soo saara hilibka ayaa haysta daraasiin shaqaale cudurka qaba.
Magaalada Tangará da Serra, oo ah magaalo ay ku nool yihiin 103,000 oo qof oo ku nool Mato Grosso, Duqa magaalada wuxuu go’aansaday Jimcihii inuu mamnuuco iibinta khamriga khamriga muddo laba toddobaad ah taasoo dhiirigelin u ah dadka inay guryahooda joogaan. Fábio Junqueira wuxuu sheegay in tallaabada loo baahnaa ka dib markii la dallacsiiyay kiisaska COVID-19 oo buuxiyay 80% 54 ka mid ah sariiraha daryeelka degdegga ah ee magaalada. Magaalada waxaa ku dhacay ku dhawaad ​​300 xaaladood oo cudurka ah, oo ay kujirto seddex dhimasho ah.
Rondonópolis, oo kaliya 300 mayl u jirta Tangará da Serra iyo hoyga dhaqaalaha kobcaya, mas’uuliyiinta caafimaadku waxay xireen warshadaha hilibka lagu iibiyo ee maxalliga ah ka dib markii 92 xaaladood lagu xaqiijiyey halkaas. Magaalada ay degan yihiin dadka deggen 144,000 ayaa tiriyay 21 dhimasho fayraska iyo in kabadan 600 oo xaaladood. Duqa magaalada ayaa sidoo kale go’aansaday inuu xadido iibinta aalkolada.
Xitaa gobolada mar loo tixgaliyo tusaalooyinka dadaallada guusha leh ee ka dhanka ah fayraska ayaa hadda la halgamaya.
Porto Alegre, oo ay ku noolyihiin 1.4 milyan oo qof, ayaa ku guuleystey yareynta faafitaanka viruska saddexdii bilood ee la soo dhaafay. Laakiin hadda duqa magaaladu wuxuu ka fiirsanayaa inuu kordhiyo talaabooyinka go’doominta bulshada ka dib markii joogitaanka ICU ee magaalada uu ku booday 80 boqolkiiba bishaan.
“Waxaan horey u sameynaynay saadaalin ku aadan iskuullada inay soo laabtaan,” Duqa magaalada Nelson Marchezan Jr. ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press. “Hadda isbeddelku waa in lagu soo rogo xannibaado dheeri ah.”
Magaalada Sao Paulo ee ka baxsan, shanta gobol ee baadiyaha gobolka waxay xiri doonaan dukaamada laga bilaabo Isniinta sababta oo ah kororka kiisaska coronavirus. Gov. João Doria ayaa ku dhawaaqay go’aanka Jimcihii.
Dr. Mike Ryan, madaxa fulinta ee Ururka Caafimaadka Adduunka, ayaa ka sheegay shir jaraa’id in Brazil ay u baahan tahay inay kordhiso dadaalkeeda si loo joojiyo faafitaanka cudurka.
“Faafida weli waa mid aad u daran Brazil. Waxaan aaminsanahay in shaqaalaha caafimaadka ay si aad ah u shaqeynayaan oo cadaadis saaran yihiin si ay awood ugu yeeshaan inay wax ka qabtaan tirada kiisaska maalin walba ay arkaan, ”ayuu yiri Ryan. “Xaqiiqdii kor u kaca ma ahan mid loo baahan yahay sidii ay ahaan jirtay, sidaa darteed waxaa jira calaamado muujinaya in xaaladdu deggan tahay. Laakiin tan hore ayaan u aragnay cudurro kale oo ka jira waddamada kale. ”
Margareth Dalcolmo, oo ah cilmi baare caafimaad iyo borofisar ku takhasusay dawada neef-mareenka ee Oswaldo Cruz Foundation ee ku taal Rio de Janeiro, ayaa aaminsan in dib-u-furista magaalooyinka waaweyn iyo fayraska ku safraya wadooyinka wadnaha ee Brazil ay sii hayn doonto cadaadiska nidaamka caafimaadka ee dalka.
“Khatarta gudaha hadda waa mid aad u weyn,” ayay tidhi. Nidaamkayaga caafimaad kaliya ma xallin karo kiisaska ugu daran ee COVID meelo badan oo ka baxsan baadiyaha. ”
Previous articleEgypt referred the Renaissance Dam crisis to the UN Security Council
Next articleDadkii ugu badnaa oo laga helay maalin kaliya covi19 Itoobiya